विवाहेत्तर यौन सम्वन्धमा किन लिप्त हुँदैछ समाज ? - Khabar Time
विवाहेत्तर यौन सम्वन्धमा किन लिप्त हुँदैछ समाज ?
यसको समाधान रेडलाइट एरिया हो कि अरु नै ?
रिनाका प्रेमी पनि विवाहित हुन् भने उनका दुई छोरा समेत छन् ।
त्यो भन्दा अझै अघि बेलबारीमा एक प्रेमीले आफ्नी प्रेमिकालाई आफ्नै घरमा हत्या गरी आफ्नै गाडीमा राखी कोशी व्यारेजमा फ्याँकेर आएपछि पनि प्रेमिकाको परिवारसँगै गएर प्रहरी कार्यालयमा प्रेमिकाको खोजी गरीदिन जाहेरी दिए । प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गर्यो । केटी पक्षका आफन्तको वयान, उसको प्रेम सम्वन्ध, केटीले विवाह गर्न दिएको दवाव र सोही कारण भएको झगडा र हराएको साझँसम्म पनि दुईजना सगैँ रहेको प्रमाण लगायत सि.सि. क्यामेरको फुटेजको आधारमा प्रहरीले हत्यारा पक्राउ गर्यो । प्रेमी तथा हत्यारा एक राजनैतिक जिम्मेवारी पाएका सामाजिक व्यक्तित्व (नेकपाको पूर्वनगर कमिटी अध्यक्ष) थिए । उनकी श्रीमति दुई छोराहरु पढाउन काठमाडौं बस्दै आएकी थिइन् । उनकी प्रेमिका श्रीमानबाट अलग भएकी एक छोरीकी आमा थिइन् ।
हामीले आफ्नालाई ढाँट्दा ढाँट्दै आफैँलाई ढाँटिरहेको कुरा थाहा पाएनौं । यसरी आफैंलाई ढाँटेर कति दिन रमाउन सक्छौं हामी क्षणिक सम्वन्धहरुमा ? कसरी सजाउन सक्छौं हामी परिवार र आफ्नै सपनाहरु ? अनि कसरी जोगाउन सक्छौं समाजका मूल्यमान्यता, परिवारको साख, बालवच्चाको भविश्य अनि आफ्नै जीवन र अस्तित्व ?
विवाहेत्तर सम्वन्ध आफ्नो जीवनसाथीको अनुपस्थितिमा जैविक आवश्यकताले जन्माएको वाध्यात्मक अवस्था हो या जीवनसाथीसँगको असन्तुष्टि ? या नयाँ यौन पार्टनरको खोजी ? चाहे जेसुकै कारणले मानिसहरु यस्तो सम्वन्धमा पुगुन् नेपाली समाजमा यस्तो सम्वन्ध अवैधानिक, अनैतिक र पापकर्म मानिन्छ ।
साथै सामाजिक मूल्यमान्यता जोगाई सभ्य समाज निर्माण गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । त्यसैले हामीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा आफ्नो कर्तव्यलाई पनि सम्झियौँ भने मात्र हाम्रा सामाजिक मूल्यमान्यताहरुले दर सन्तानलाई पनि घरपरिवार, समाज र राष्ट्रप्रति नैतिक बन्न प्ररित गर्ने थियो ।
चालु खर्च मोटाउँदै, विकास खर्च दुब्लाउँदै